Oromo Free Speech: “Waa Malli Nu Dhibus,….Keessaa Baana Rakkoo!”
Dhaabasaa Waaqjiraatiin | October 1, 2013
(Oromo Media) — Guyyaan Irreechaa sirna hoo’aa fi miidhagaan kabajame. Sagantaan sun akka xumurameen kaa ijoollee fi maatii isaanii waliin gama qe’ee isaaniitti deebi’aan; kaan immoo gara qophii isa galgalaa, kan haga halkamaa (halkan-maayessa) fulla’uuf karoorafametti imalan. Sagantaan qophii bashannannaa kun kan qophaa’e galgala keessaa haga halkan waariitti waan ta’eef, namuu suuta gara qophiitti yaa’ee dhufe.
Dhugaadha, jalqabaa irratti namoota muraasa callaatu mul’ata ture; san kan arge, qophiin waan hafe se’ee deebi’uu illee kan kajeele ture. Ammoo suuta suuta namni guutaa dhufee, qophiinis eegalamuun ifatti himame.
Posted by Oromo firee speech at 2:17 PM